Ihe mere metro Mexico City ji daa
Ihe kpatara metro Mexico City ji daa - New York Times
By TELES RELAY	 On June 14, 2021
NYPD na -achọ ndị a na -enyo enyo na agbapụ na Queens nke ...
Ntụziaka ọkụkọ eghe eghe na zucchini na basil -…
Na -agbagọ na Jenụwarị 6, GOP Concocte ugbu a na -agba mbọ…
Mgbe Tania ghọtara onwe ya, olu ya jidere n'agbata ụzọ ụgbọ oloko, isi ya na-apụta site na ihe mkpofu ahụ, ísì ọbara na-agba n'oghere imi ya.
Ahụ na-agbasasị n'elu ya, aka ya gbatịrị agbatị dị ka eriri akpa nwa nwanne ya nwanyị. Ka ọ na-adọga, ọ sịrị, ọ chọpụtara na ọ bụ eriri afọ nke onye njem ọzọ.
Tania na-etinyezi ụbọchị ya n'ụlọọgwụ, na-enweghị ike ịga ije, pelvis ya gbajiri agbagọ nke ejiri ngwaọrụ igwe, kposara anọ na-esite n'akụkụ abụọ nke ahụ ya. N’elu ihe ndina ụlọ ọgwụ ya bụ foto nwanne ya nwaanyị bụ Nancy, dị afọ iri abụọ na abụọ, otu n’ime mmadụ iri abụọ na isii nwụrụ n’ụgbọala okpuru ahụ n’abalị ahụ.
N'oge na-adịghị anya, Onye isi Mexico bụ Andrés Manuel López Obrador, onye gosipụtara onwe ya dị ka onye mmeri nke ndị ogbenye na onye iro nke ndị ọnụ na-eru n'okwu, rịọrọ ndị ezinụlọ nke ndị ahụ mgbaghara ma rịọ ndidi ka ndị ọchịchị na-enyocha ihe na-adịghị mma na onye ga-ata ụta.
"Ndị dị umeala n'obi, ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị ezigbo mmadụ ghọtara na, ọ dị mwute, ihe ndị a na-eme," ka o kwuru na nnọkọ ogbako na Tuesday.
Mana nyocha nke New York Times - dabere na ọtụtụ afọ nke akwụkwọ gọọmentị, ajụjụ ọnụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ na iwu ahụ, yana nyocha ọkachamara nke ihe akaebe sitere na saịtị ahụ dara - hụrụ mmejọ dị njọ na isi ihe metro nke yiri ka ọ dugara ozugbo. odida ya.
Ọdachi ahụ agbanyelarị n'ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-eyi egwu na ọnyà abụọ n'ime ndị kachasị ike nke mba ahụ: Mịnịsta mba ofesi nke Onye isi ala, Marcelo Ebrard, na otu n'ime ndị ọchụnta ego kacha baa ọgaranya n'ụwa, Carlos Slim.
Maazị Ebrard bụ onye isi obodo Mexico City mgbe e wuru ahịrị metro ọhụrụ ahụ, nke a maara dị ka "Golden Line," mgbasawanye mara ọkwa nke metro nke abụọ kachasị na America nke nwere ike ịkwalite asambodo ya maka agbụrụ onye isi ala. Mrlọ ọrụ na-ewu ụlọ nke Mr Slim, Carso Infrastructure and Construction, wuru akụkụ nke eriri ahụ dara - ọrụ ụgbọ okporo ígwè mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na-emeghe ụzọ maka ndị ọzọ.
The Times were ọtụtụ puku foto nke saịtị ahụ mebie ma kesaa ihe akaebe ahụ na ọtụtụ ndị injinia kachasị elu bụ ndị rutere n'otu nkwubi okwu ahụ: welds, njehie ndị dị oke egwu nke nwere ike kpatara ọgbaghara ahụ.
Nke a bụ otu n'ime isi nkọwa ndị isi obodo Mexico City na-atụle, dị ka ọtụtụ ndị maara nke ọma na nchọpụta gọọmentị banyere ọdachi ahụ, ọ na-atụkwa aka n'ụkpụrụ nke ịdị mkpa nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọrụ ọghọm n'oge a na-ewu metro.
Taa, ụlọ ọrụ Maazị Slim na-ewu akụkụ dị mkpa nke ọrụ mbinye aka ọzọ - Tren Maya, okporo ụzọ ụgbọ oloko dị 950 nke Maazị López Obrador kwadoro nke ga-eme ka ọ dịghachi na ndịda Mexico ma nye aka mee ka ihe nketa ya bụrụ onye isi ala. Mana ụfọdụ ndị injinia na-arụ ebe ahụ na-ekwu na ha na-enwe nsogbu yiri nke ha chere ihu oge a na-ewu ụgbọ ala dara ada.
The Times nyochara ọtụtụ puku peeji nke gọọmentị dị n'ime ya na akwụkwọ azụmaahịa banyere akụkọ nsogbu ụzọ ụgbọ oloko ahụ, na-achọta ihe karịrị afọ iri nke ịdọ aka na ntị na nchedo nchekwa tupu ọdachi ahụ.
• Na ngagharị iji wuchaa, obodo ahụ chọrọ ka ụlọ ọrụ na-ewu ihe mepe metro nke ọma tupu Maazị Ebrard ka onye isi obodo gwụ na 2012. Ọgba aghara ahụ butere usoro ihe owuwu nke malitere tupu Mazị emezue atụmatụ ya ma mepụta ntụpọ metro line site na mmalite. Mkpesa banyere okwu a siri ike nke na Mazi Ebrard mechara hapụ obodo ahụ ọnwa iri na anọ wee hapụ ihe ọ kpọrọ "ndọrọndọrọ amoosu nke ọchịchị".
• Ndị nyocha na-ahụ maka ego chọpụtara na obodo ahụ "na-ekwe ka ọrụ adịghị mma" ọbụlagodi a na-arụ usoro ahụ. E gosipụtara metro ahụ ihe na-erughị otu awa tupu e wepụta ya, n'agbanyeghị na ọtụtụ puku ọrụ arụchabeghị, dịka nyocha nke 2014 site n'aka ndị omebe iwu obodo ahụ.
• N'ime nnyocha mgbe oke ala ọmajiji mere na 2017, obodo ahụ chọpụtara njehie na mbido mbụ nke ngalaba nke ụlọ ọrụ Mr Slim wuru, gụnyere nke jupụtara na simenti na ihe ndị na-efu efu, dị ka akwụkwọ gọọmentị na-ekwupụtabeghị na 2017.
Ndị na-aza izizi na egwu n'ụtụtụ mgbe ida ahụ daa.Alejandro Cegarra maka The New York Times
TN'abalị nke ihe mberede ahụ, Tania kwuru na metro amala jijiji nke ukwuu "ọ dị ka ịgba egwu".
Ejiri otu okwu a mee ihe afọ asaa gara aga - mgbe ndị isi obodo nwere nchegbu dị ukwuu banyere metro ọhụrụ ahụ, nke a maara dị ka Line 12, nke na ha mechiri akụkụ ya na 2014 - naanị ihe dị ka ọnwa 17 ka e mesịrị.
Joel Ortega, onye njikwa metro n'oge ahụ kwuru, sị, "Ahịrị ahụ na-agba egwu." O kwuru na ụgbọ ahụ “na-ese n’elu mmiri.”
Mgbe Maazị Ebrard kwupụtara metro ọhụrụ ahụ otu ụbọchị n'August 2007, ọ kpuwere ya 'akara ọla edo', na-ekwe nkwa iwu mpaghara metro kachasị ọhụrụ na Latin America, yana ndị njem nweta. Ndị nwere nkwarụ, ịntanetị, nlekọta ụbọchị - ọbụnakwa ụlọ ngosi ihe nka.
Mazị Ebrard kwere nkwa na ọ ga-agbanwe ndụ ndị ogbenye na ndị aka ha dị obere, na-enye onye isi obodo a ohere ịhapụ akara ya n'isi obodo Mexico.
"Ọ bụ nnukwu ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya," ka Moisés Poblanno kwuru, onye rụrụ ọrụ maka Maazị Ebrard n'oge ahụ ma bụrụ onye na-emechi mmekọrịta anya. "Marcelo mere ọtụtụ ihe n'ọchịchị, mana ka ọ dịkarịsịrị mkpa bụ ahịrị 12."
Ọchịchọ ya yiri nke nnukwu onye ọzọ nọ na Mexico: Maazị Slim, onye ọgaranya ahụ chọrọ ịgbasa alaeze ya na ụlọ ọrụ ụgbọ oloko na-akwụ ụgwọ. Line 12 bụ ụlọ ọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Antonio Gómez García, onye isi njikwa nke Group Carso kwuru, sị, "M na-agbakọ mbọ mgbe niile iji nweta ahụmịhe na mmalite anyị, na N'ajụjụ ọnụ. "So na-ewu akara, ma ọ bụ ọ bụla dị otú ahụ na-enye na-emeri ya, na-enye ohere ka ị na-a akụkụ nke ọzọ. "
Ma nsogbu ndị bụ isi na metro pụtara n'oge na-adịghị anya. N’ịga ọsọ ka ọ gwụchaa Maazị Ebrard hapụrụ ọfịs, obodo ahụ zụtara n'ụgbọala ndị bịara ọsọ ọsọ mana ha adabaghị n'ụgbọ okporo ígwè - wiil ndị ahụ adabaghị nke ọma na egwu ahụ. Ihe si na ya pụta bụ mkpọmkpọ ebe mgbe niile, na-agba mbọ na ọgba aghara nke ihe gaara abụ ụzọ nchara dị nro.
N'ihe na-erughi otu afọ mgbe ha kwenyesiri ike na akara ahụ dị mma, ndị nyocha nyochapụtara akụkọ na-edepụta ọtụtụ nsogbu - akụkụ gbawara agbawa na nke agbajiri agbaji, usoro ndị na-emebi emebi na ịkụgharị egwu egwu.
Nsogbu nke akara 12
Akụkọ gọọmentị dọrọ aka na ntị banyere nsogbu zuru ebe niile na eriri ahụ tupu ọ daa.
Nkebi nke rails bụ ndị gbagọrọ agbagọ, enweghị aha, ma ọ bụ gbawara.
Ụgbọ oloko dị mkpụmkpụ karịa ka e mere usoro egwu ahụ. A na-eme wiil ndị ahụ n'ụkpụrụ dị iche karịa rails, nke na-eweta okwu ndakọrịta.
le ndị na-ehi ụra - kwụ ọtọ n'okpuru rails - gosipụtara mgbape, mgbawa na akara nke ịrụ ọrụ na-ezighi ezi ma ọ bụ ntinye.
Ọnụ ọgụgụ nke nkume ballast nke kpochiri ma mechie ihe owuwu ahụ ezughi oke na ngalaba buru ibu.
Nkebi nke rails bụ ndị gbagọrọ agbagọ, oge ụfọdụ ma ọ bụ gbawara.
Isi mmalite: Akụkọ gọọmentị na akaebe ọkachamara.
Mmebi ahụ adịla njọ nke na ọ "tinyere nchekwa nke ndị ọrụ," Maazị Ortega kwuru na akaebe ya mgbe emechiri ahịrị ahụ. Mgbe ihe karịrị otu afọ rụzigharị, obodo ahụ meghere ya na 2015. Mana nsogbu ahụ dịgidere, na nchegbu na-abawanye mgbe ala ọma jijiji jọgburu onwe ya na 2017.
Fearedfọdụ na-atụ ụjọ na enweghị ike idozi ntụpọ ndị ahụ, zoo ha n'ime miri emi n'ime ụlọ ahụ.
"A mụrụ ahịrị a n'ọrịa kansa," ka Jorge Gaviño, onye nduzi nke metro kwuru n'oge ala ọma jijiji ahụ nke 2017. "Nkọwa nke ezighi ezi ezighi ezi bụ na ị gaghị ahụ ha - n'elu elu ihe niile dị mma, mana enwere nsogbu dị n'okpuru. "
Na nkwupụta nke Times, Mr Ebrard kwuru na "nsogbu ndị a hụrụ" n'oge a na-ewu ụzọ ụgbọ oloko emetụtaghị ọrụ ya. Ọ tụrụ aro ihe kpatara ọgbaghara ahụ nwere ike jikọtara ya na ndozi, na-ekwu na ọ gaghị ekwe omume ịmata ma ọ bụrụ na onye nọchiri ya "rụzuru mmezi niile achọrọ ma ọ bụrụ na ala ọma jijiji ruru oke ụfọdụ".
Maazị Ebrard kwuru, sị, "Line 12, nke baara ọtụtụ nde mmadụ uru kemgbe ọtụtụ afọ, bụ ma eleghị anya usoro nchekwa ọha kachasị enyocha na akụkọ ntolite Mexico."
Ma ihe akaebe sitere na ebe ụgbọelu ahụ dara na-egosi na nrụrụ metro ahụ dị omimi karịa mmezi.
N'okpuru okporo ụzọ, akara nke na-ebu ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu nde mmadụ site na isi obodo Mexico kwa ụbọchị, ejiri spikes yiri bolt. Ejiri ya na nchara ma tinye ya na nkedo, ha mebere ihe siri ike karie ma obu ihe.
Ike nke viaduct dabere na ihe ndị a - ha bụ njikọ dị mkpa iji mee ka ọ dị.
Ma foto nke mkpọmkpọ ebe na-egosi ntụpọ dị mkpa n'oge a na-ewu ya: welds na-ejikọ ihe niile ọnụ esighi ike. Foto na-egosi na ọwapụrụ iche site na eriri igwe, na -emepụta ihe ndị injinia kpọrọ usoro enweghị ike ịkwado ụgbọ oloko ahụ.
Ihe akaebe na mkpọmkpọ ebe
Ebe ọdịda ahụ na-enye ihe ngosi maka ọdịda ahụ ma na-atụ aro na awụnyere okporo osisi ndị ahụ n'ụzọ na-ezighi ezi.
Ngwongwo ígwè gbagọrọ agbagọ n'ime
Ihe omuma ndi mbu na-egosi na mkwado nke na-eme ka ogidi ndị ahụ gbanwee.
Osisi ndị ahụ mere nkwụsị dị ọcha ebe a na-agbanye ya na nchara.
Foto dị n'aka Alejandro Cegarra maka New York Times
"Ọdịdị dị mma nke weld agaraghị ada dịka nke a," ka Gary J. Klein, onye otu National Academy of Engineering na onye isi na Wiss, Janney, Elstner, kwuru, bụ ụlọ ọrụ na-amụ ihe ọdịda metụtara njikọ.
Ejiri nlezianya edozi Cleats ahụ, na-enweghị obere nkọwa zuru ezu, ndị injinia nyochara foto ndị a kwuru. Ndudue doro anya: ndị ọrụ ahụ ewepụghị ọtụtụ mgbaaka seramiiki ejiri gbaa gburugburu studs n'oge echichi. A pụrụ ịhụ ọtụtụ mgbaaka ndị a ka ha na-agbakwunye na slabs ndị dara n ’abalị ahụ.
E wezụga nke ahụ, itinye ọkwa ndị ahụ bụ nke na-adịghị agbanwe agbanwe nke na ọ dị ka nkwalite nke ndị ọrụ karịa ịsọpụrụ agbaso atụmatụ atụmatụ, dịka ndị injinia nyochara foto ndị ahụ.
Mgbe metro mere njem ikpeazụ ya, nsogbu niile metụtara ndụ nwere nsogbu.
"Mgbe ogwe ndị ahụ kụrụ afọ n'ala, nchara na nchara ahụ arụghị ọrụ ọnụ," ka Donald O. Dusenberry, onye injinia na-ahụ maka nyocha, onye nyochaworo ọtụtụ mmiri akwa, kwuru. “Nchara ahụ emikpuola. "
Isi mmalite: Associated press. Rịba ama: A na-egosipụta ngalaba nke vidiyo na ọsọ ọsọ.
Mgbe ala ọma jijiji mechara bibiri isi obodo na 2017, obodo ahụ mere nyocha nke aka ya wee chọta ntụpọ ndị ọzọ na akụkụ nke ụlọ ọrụ Maazị Slim wuru. Otu akwụkwọ gọọmentị dị n'ime obodo nke 2017 nke Times tụlere kwuru na akụkụ nke viaduct ahụ nwere "ntụpọ nhazi," ihe igwe anaghị adị, ụfọdụ akwa ahụ wụsarakwa nke ọma, njehie na-egosi "akpachapụghị anya.".
Mazi Gómez García, onye isi njikwa nke Group Carso, Mr Slim na-agbasa alaeze ukwu, kwetara na N'ajụjụ ọnụ na ịhapụ mgbaaka seramiiki gburugburu posts adịghị mma, ma kwuo na ọ metụtaghị usoro ahụ.
"Enwere ihe akpọrọ ezighi ezi ezoro ezo, na njedebe nke ụbọchị ndị a bụ ihe ndị nwere ike ime," Gómez García kwuru. “N’ụzọ dị mwute, ha nọ na foto a. Ha ehichapụghị ha.
Nnyocha nke saịtị ọdịda na May 10.Alejandro Cegarra maka The New York Times
Maazị Gómez García kwuru na ya kwenyere na okporo osisi ahụ agbaghị ruo mgbe viaduct dabara na ala "ọ bụghị ha kpatara ihe mberede ahụ". Ọ gbakwụnyere na mmezi nwere ike ịta ụta, ebe akụrụngwa na akụrụngwa ejiri rụzie eriri ahụ mgbe emechiri ya na 2014 dị arọ, ikekwe na-etinye nrụgide dị ukwuu na viaduct ahụ.
Ma ọtụtụ ndị ọkachamara nọọrọ onwe ha ajụwo nkọwa ahụ, na-arịba ama na ihe akaebe eserese na-arụtụ aka na ndị welds na-adịghị ike dị ka ihe nwere ike ịkpata mkpọka ahụ.
WIhe nyocha ọ bụla gọọmentị kpebiri, okuku ahụ nwere ike inwe nnukwu nsonaazụ, ọ bụghị naanị maka Mr. Ebrard na Maazị Slim (onye bụbu onye nweburu ego na New York Times Company). Ọ bụrụ na mmezi rụụrụ ọrụ, ndị ntuli aka nwekwara ike ịta ụta nye onye nkwado onye isi ala Claudia Sheinbaum, onye lekọtara metro dị ka onye isi obodo Mexico City n'ime afọ abụọ gara aga.
Claudia Sheinbaum, onye isi obodo Mexico City, n'afọ gara aga.Meghan Dhaliwal maka New York Times
Dika mmadu abuo kachasi ike na ndi ochichi, Ms Sheinbaum na Mr Ebrard ka ha choro ka ngọzi nke Mr López Obrador soro ya ma merie na nhoputa ndi ochichi nke 2024.
Site na nkpu ihu ọha banyere ihe mberede ahụ, nchịkwa gọọmentị Sheinbaum nyere ihe dịka $ 32 maka ezinaụlọ ọ bụla onye mmadụ hụrụ n'anya nwụnahụrụ. Ma ụfọdụ ajụla ego ahụ ma na-agba akwụkwọ okpuru oke nke Mexico City.
Bernarda Salgado López, bụ́ nne Tania, onye ka nọ n'ụlọ ọgwụ, na Nancy, nwụrụ, kwuru, sị: "Achọghị ahịrị ahụ nke ọma." Nwaada Salgado esonyela n’ikpe a.
"Echere m na ha kwesịrị ịza ajụjụ maka ihe mere, maka ihe niile, maka onye ọ bụla nwụrụ," ka o kwuru.
Bernarda Salgado López na Humberto Lezama, ndị nne na nna Tania, ka nọ n'ụlọ ọgwụ, Nancy nwụrụ.Alejandro Cegarra maka The New York Times
Fsite na mbido, o doro anya na gọọmentị chọrọ ime ka ọnụ ala dị ala na metro na ịbịaru ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee.
Na mbido, ebumnuche bụ iwu eriri kpamkpam n'okpuru ala, mana ọ bịara doo anya na nke a ga-adị oke ọnụ ma dịkwa ogologo. Obodo ahụ mebiri mmefu ego maka metro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
Otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ nke metro ụgwọ ọrụ depụtara uru na ọghọm nke otu usoro dị elu. Ọ ga-adị ọnụ ala ma dịkwa ngwa karịa, mana enweghị nchekwa. Obodo mechara gbanwee ụzọ wee kpebie ịhọrọ akara elu.
Iji merie nkwekọrịta ahụ na 2008, ụlọ ọrụ Maazị Slim, Carso Infrastructure and Construction, sonyeere ụlọ ọrụ abụọ guzobere - otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na Mexico, ICA na Alstom na France. Carso enweghị ahụmịhe n'ịrụpụta ụgbọ okporo ígwè, mana o nwere agwa abụọ mara mma: ịba ụba n'etiti ọgba aghara akụ na ụba ụwa na ịnweta ụlọ ọrụ nchara nke Mr Slim nwere.
"Ọ bụghị naanị ego ahụ, ọ bụ nchara," ka Gómez García kwuru.
Mgbe owuwu ahụ malitere, ndị nyocha gọọmenti etiti chọpụtara ajọ ọrụ. N'ime akụkọ ha dere na 2009, ha depụtara "ọrụ a na-emeghị nke ọma" nke emere "na-enweghị njikwa mma", tinyere ihe ndị ọzọ, na-ekwu na "enweghị nkwukọrịta zuru oke" n'etiti ndị otu na-elekọta ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ ndị na-ewu ụlọ. Maazị Ebrard gwara ndị Times na "nyocha niile" sitere na ndị nyocha gọọmentị etiti "emebiela."
Obodo ahụ rụgidere ndị ọrụ ngo ahụ ka ha rụchaa ọrụ ahụ ngwa ngwa o kwere mee. Companieslọ ọrụ ndị ahụ chere ezi ihe ruru $ 120 nde ma ọ bụrụ na ha emechaghị nke ọma tupu njedebe nke oge Mr Ebrard, dị ka Enrique Horcasitas si kwuo, onye njikwa ọrụ ahụ. Owuwu bidoro tupu emejuputa atumatu oru.
Maazị Ebrard kwuru na ojiji nke atụmatụ "dị ka e wuru", nke ụlọ ọrụ na-ede atụmatụ ka esi wuo ha, bụ ihe a na - ahụkarị ma "kwe ka mgbanwe nke teknụzụ" na-enweghị "imebi ntụkwasị obi ma ọ bụ ntụkwasị obi. Ọrụ nchekwa".
Ma ọtụtụ ndị injinia na-arụ ọrụ na Line 12 ma gwa The Times kwuru na ọtụtụ n'ime nnukwu ọrụ ha rụworo ọrụ, ma ọ bụ na Mexico ma ọ bụ nke esenidụt, dabere na ụkpụrụ site na mbido.
"E wụghị ya na nnukwu atụmatụ," ka Mario Alberto Ruiz kwuru, onye rụrụ ọrụ dị ka injinia maka ICA iwuru eriri ahụ, "ọ bụkwa isi iyi nke ọtụtụ ọdịda. "
“Karịsịa, anyị kwesịrị iwu ngwa ngwa o kwere mee, n'ihi na, dịka ị maara nke ọma, a ga-enwe mgbanwe gọọmentị,” ka o kwupụtara.
Nsogbu kacha adọrọ mmasị ọha na eze bụ ịzụ ụgbọ oloko, nke na-esichaghị ike n'okporo ụzọ ndị ahụ.
Ndabere a sitere na mkpebi ọzọ ịchekwa oge. Ezubere ụgbọ okporo ígwè ahụ na ụkpụrụ ndị America, dị ka akaebe sitere na nyocha nke 2014 site n'aka ndị omebe iwu obodo. Mana gọọmentị mechara họrọ onye na-ebubata ndị Spain, CAF, nke na-enye ụgbọ oloko edoziri maka nkọwapụta Europe. Ihe kpatara ya: CAF kwere nkwa iwepụta ụgbọ oloko ahụ ihe dị ka otu afọ tupu onye asọmpi Bombardier nke dị na Canada.
"Bombardier nyere anyị ogologo oge," ka Francisco Bojorquez, bụ onye nduzi nke metro n'oge ahụ, kwuru na akaebe 2014. "Ọ bụ ihe oge na ohere. "
Ekwekọrita mere ka ndị mmadụ laa n'iyi na obodo ahụ gbanwere ọkara kilomita nke ụzọ ụgbọ okporo izu tupu metro amalitela ibu ndị njem.
Ka nraranye ahụ na-eru nso na 2012, ndị injinia na ndị ọrụ ibe ha rụrụ ọrụ abalị niile, na-agba mbọ ịweghachi ahịrị ahụ n'ọnọdụ dị mma.
"E nwere nrụgide dị ukwuu," ka Marcos Tapia Manjarrez, bụ onye rụkwara ọrụ ICA na ahịrị ahụ. “Anyị rụrụ ọrụ na mgbanwe - Ana m ekwu maka awa 18 kwụ ọtọ. "
Esemokwu ahụ dịwanye elu mgbe Mr Ebrard gara nleta iji chọpụta ọganihu, ndị injinia kwuru.
"Ha dị ka 'onye isi obodo na-abịa' na o doro anya na nke ahụ na-enye anyị nsogbu n'ihi na anyị enwebeghị ezigbo ọganihu," Ruiz kwuru.
Maazị Ruiz kwuru na ọ wụnyere ọkụ nwa oge, naanị ka a wee nwee ụzọ iji bulie ụlọ ọrụ maka emume nnabata ahụ. Ọkụ ahụ bụ naanị maka ngosi - ha wepụrụ ya ozugbo.
Obodo ahụ nwetara asambodo nchekwa akara ihe na-erughị otu awa tupu Maazị Ebrard egbutu teepu ahụ, dị ka akụkọ ikpeazụ nke ndị omebe iwu si dị na 2014.
"Taa anyị nwere ihe ùgwù ịnyefe ọrụ a ọha na eze n'aka ndị Mexico City," Ebrard kwuru na emume ahụ. “Ọrụ zuru oke nke ọha, nke emechara, yana teknụzụ kachasị elu n'ụwa. "
Obere oge mgbe otu afọ gachara, emechiri eriri ahụ.
Mgbe ahụ, onye njikwa metro Mr Ortega kwuru na nyocha nke 2014 na mgbe nanị otu afọ nke ọrụ gasịrị, akụkụ nke usoro metro na-egosi ihe ngosi nke uwe na akwa nke a ga-atụ anya. Mgbe afọ iri gasịrị.
Otu ụlọ ọrụ ahụ nke kwadoro akara ahụ mere nyocha otu afọ mgbe e mesịrị ma chọpụta ihe karịrị okwu iri na abụọ, gụnyere "mgbapụ na-adịghị mma" nke egwu na ịgbado ọkụ na-adịghị mma.
Maazị Ortega kwuru, "Ọ bụrụ na ihe ọghọm, ọ bụghị naanị na ụgbọ oloko ahụ ga-apụ n'ụzọ, mana anyị nwere ike nwee nnukwu ọdachi. "
On n'abalị ahụ mberede ahụ, mgbe Tania na nwanne ya nwanyị na-alọta ahịa, ụgbọ oloko juru na ndị njem. Tania kwuru na ọ gbalịsiri ike ijide osisi ka ụgbọ oloko ahụ na-agbagharị n'okporo ụzọ ahụ tupu ya agbada n'okporo ụzọ dị n'okpuru.
Tania gbalịsiri ike ịchọta nwanne ya nwanyị ka ndị njem merụrụ ahụ na-akpọ maka enyemaka. Ọ bụ rue ụlọ ọgwụ ka ọ nụrụ banyere ọnwụ nwanne ya nwanyị.
"M chere na ọ bụ m kpatara ya," o kwuru n'ụzọ siri ike. “Emere m ka anyị gaa weta uwe m.
Ka akụkọ banyere ida ahụ gbasara, otu ndị injinia na-arụ ọrụ na Tren Maya, ụzọ ụgbọ oloko ọhụrụ nke 950 nke onye isi ala gbachitere - akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ M bụ Slim na-ewu - sonyere na mkparịta ụka otu na WhatsApp. Ruo ọtụtụ ọnwa, ndị injinia gbanwere nchekasị na nkụda mmụọ, na-eme mkpesa banyere usoro nhazi na ngwa ngwa nke nhazi.
Maazị López Obrador weputara mbido June gara aga, ngalaba gọọmentị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke na-elekọta Tren Maya kwuru na nkwupụta a na-eji "ụkpụrụ kachasị mma na nchekwa" arụ ọrụ ahụ, agbanyeghị na ọ matala na ọ na-agbanwe mgbe niile nna ya ukwu. atụmatụ. .
"Ihe oru ngo Tren Maya bụ nkwa mgbasa ozi sitere n'aka gọọmentị dị ugbu a ma anyị nwere nkwa iji mezue ya tupu njedebe" nke okwu Maazị López Obrador dị ka onye isi ala, ụlọ ọrụ ahụ kwuru.
N'ime ọtụtụ narị akwụkwọ akụkọ Times lere anya, ndị injinia tụlere ọganihu ụlọ na Tren Maya na-enweghị atụmatụ ma ọ bụ nkọwapụta akwadoro, yana atụmatụ ndị a na-emezughị.
Na Mee 4, uche ha tụgharịrị na ọdụ ụgbọelu Line 12, nke ụfọdụ n'ime ha nyere aka wuo. Ndị injinia wepụtara echiche dị iche iche banyere ihe merenụ, mana ọtụtụ yiri ka ha kwenyere n'otu isi okwu: ahịrị ahụ adịchaghị mma.
"Lee ọdachi! "Otu engineer kwuru," dọrọ aka ná ntị dọrọ aka ná ntị ... "
Tribtụ ụtụ isi ifuru na ọnụ ụzọ ọdụ ọdụ ọdụ Olivos dị nso ebe viaduct dara.Alejandro Cegarra maka The New York Times
Edemede a pụtara izizi (n'asụsụ Bekee) na https://www.nytimes.com/interactive/2021/06/12/world/americas/mexico-city-train-crash.html
daaụzọ ụgbọ olokoMexicoPourquoisestTimesYork
Kedu ka ndị crooks si dị ka ndị agha iji wepụ ego n'aka ndị ọ metụtara
NYPD Chọrọ ndị a na -enyo enyo na ogbunigwe na Queens nke merụrụ mmadụ 10 ahụ…
Achịcha eghe eghe na zucchini na akwụkwọ nri basil - New York Times
Na-agbagọ na Jenụwarị 6, GOP na-achịkọta akụkọ akụkọ niile ...
Trump gwara ngalaba na -ahụ maka ikpe ziri ezi ka ha kwupụta nsonaazụ ntuli aka ...